Ku kaxayso si aad u ogaato “kacaanka cagaaran” ee warshadaha baakadaha
Markaad tan akhrido, miyaad ku dhiirataa inaad cabto qaxwo maalin kasta koob warqad lagu daboolay oo PE ah?
Dhex gal APP pulp mill oo arag sida geedku u noqdo saxarka?
Warqadda koobabka warqadda caagga ah ee Zero waxay heshay shahaadadda bacriminta baaba'aysa ee TÜV
Maalin wanaagsan oo waxaan rajaynayaa inaad si fiican u socoto.
Maanta waxaan ku tusi doonaa macluumaad warshadeed oo kuu gaar ah oo ku saabsan FBB, dhammaanteen waan ognahay in dhammaan qiimaha (alaabta ceeriin & qiimaha dhoofinta) ay aad kor ugu kacaan ka hor waxayna naga dhigi doontaa labadeenaba xaalad adag. Annaga oo ah wakiilka wakiilka weyn ee APP gudaha iyo dibaddaba waxaan ku siin doonnaa kan ugu cusub ...
Waa maxay warqadda dahaarka leh ee PE?
1: Macnaha warqadda dahaarka leh ee PE: ku dabool filimka caagga ah ee dhalaalaya PE si siman dusha warqadda si aad u samaysato warqad dahaarka leh, oo sidoo kale loo yaqaanno warqadda PE. 2: Shaqada iyo dalabka Marka la barbardhigo warqad caadi ah, waxay leedahay iska caabin biyo iyo saliid. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu sameeyo cuntada ...
Tallaabo yar Farqiga weyn- Guddiga Biyo
Dib -u -warshadaynta PE -da 一 ： Xaaladda qalabka farshaxanka Dib -u -warshadaynta 1. ururinta 2. kala -soocidda 3. goynta 4. dhaqidda 5. gubidda iyo ka -qayb -qaadashada 2. Dib-u-warshadaynta kharash-ku-ool ah oo hufan ...
MAXAAN U CAAWINAYNAA BILAASH BASAASI AH
Qiimo jaban, adeegsi habboon, si fudud u shaqaynta iyo soosaarista, culeys fudud, iyo guryaha jirka iyo kiimikada deggan, baco ayaa mar loo tixgeliyey inay ka mid yihiin agabyada “ugu guulaha badan” ee uu abuuray aadanaha taariikhda. Si kastaba ha noqotee, iyada oo la raacayo xaddiga badan ee isticmaalka, xaddiga p ...
Haye, marka hore gabi ahaanba waan fahmay waxaad ka welwelsan tahay iyo sababta, maxaa yeelay mar walba waxaad tahay macmiilka ugu dambeeya ee warqadda ka hor .Waxaa jira qodobo sida hoos ku qoran waxaan rabaa inaan kuu sharaxo sharraxaad cad, si kasta oo aad noola shaqayso ama maya . 1: ”NINGBO FOLD” guddiga fool maroodiga ee C1S waa se ...
Looxa maroodiga lagu dahaadhay ee darajada cuntada ah
Kaararka cuntada ee aadka u sarreeya oo leh hal dhinac oo aad u culus Qiimaha alaabta hoose | Ma jiro iftiin iftiin leh Dhumucdiis: 1.63-1.74 cm3/g; Miisaanka 200 ~ 350g/m2 Soo jeedin: density Cufnaanta fudud, aadka u fudud, bay'ada u fiican, hooseysa ...
Waxyaabaha aad rabto inaad ka ogaato warqadda kraft
Waa maxay warqadda kraft? Waraaqda Kraft/Kraft waa warqadda ugu adag, oo xooggeedu yahay 32 ilaa 125 garaam halkii mitir labajibbaaran. Dusha warqaddu waa midab midab leh, waxaa loogu magac daray sababta oo ah u ekaanshaha qashin -qubka. Saxarka warqadda kraft waxaa laga soo saaraa alaabta ceeriin ah iyadoo la raacayo habka karbaashka kraft. Waxaan ...
Fibre dheer warqadda saxarka oo dhan
Waraaqaha dhaadheer ee xaashiyaha qoryaha oo dhan warqadda saxarka alwaax ee caadiga ah ee loo adeegsado habka wax -soo -saarka ayaa ah saxarka gaagaaban ee gaagaaban, laakiin waxaan isticmaalnaa saxarka dheer ee fiber -ka, xoogga gilgilka 5 jeer ayaa ka fiican fiber -ga gaaban! Qallafsanaan aad u fiican iyo iska caabin adag oo jabisa fiber dheer ma aha oo kaliya ...
HORDHAC KU SAABSAN WARQAD
HORDHAC KU SAABSAN WARQADDA 1: Warqadda dib -u -dhigga ee dib -u -dhigga ah ayaa inta badan loo adeegsadaa daabacaadda lithographic (offset) ama mashiinnada daabacaadda kale si loo daabaco qalabka daabacaadda midabka oo aad u horumarsan, sida wargeysyada sawirrada midabka, buugaagta sawirrada, boodhadhka, summadaha midabka daabacaadda iwm.
HORDHAC KU SAABSAN WARQAD Warqadda gargaarka waa warqadda ugu weyn ee loo isticmaalo buugaagta daabacaadda gargaarka iyo joornaalada. Ku habboon shaqooyinka muhiimka ah, buugaagta sayniska iyo teknolojiyadda, joornaalada tacliimeed iyo qalabka wax lagu baro, sida warqadda qoraalka. Warqadda gargaarka sida ku cad halabuurka ...
Waa maxay sababta dhumucda warqadda G (G)?
Waa maxay sababta dhumucda warqadda G (G)? Unugga waraaqaha oo dhan waa G (G). Qaado miisaanka mitir labajibbaaran oo warqad ah oo lagu cabiro dhumucda gaarka ah ee warqadda. Tusaale ahaan: warqad nuqul caadi ah waa 80g, oo u dhiganta culeyska mitir labajibbaaran ee nuqulka p ...